सावधान ! बच्चालाई सुताएर दुध खुवाउँदा हुनसक्छ कान पाक्ने समस्या - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका २२ साउन २०७८, 8:47 pm
डा. जयेन्द्र प्रधानांग नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ
बच्चा र वयष्कको कानको एनोटोमीमा फरक हुन्छ । कानबाट घाँटीमा जाने एउटा ट्युब हुन्छ । त्यसलाई हामी स्टुयाच्युट ट्युब भन्छौ । कानको मध्य भागबाट नाकको पछाडि घाँटीसम्म जान्छ । बच्चाको सानो, मोटो र सीधा (तेर्सो) हुन्छ । तर, वयष्कमा भने मसिनो, सानो र ठाडो हुन्छ ।
जालीमा प्वाल भएपछि सुन्ने शक्तिमा कमी आउँछ । पटकपटक इन्फेक्सन हुन्छ र कान पाक्छ । क्रोेनिक हुँदा सुन्ने क्षमतामा निकै कम हुन्छ । कानको माथिल्लो भागको हड्डी खिइँदै जान्छ । ब्यारियर ब्याक खिइँदा फेसियल नर्भमा असर परी आँखा बन्द नहुने र फेसियल एक्सप्रेसनमा समस्या देखिन्छ । ब्रेनमै पनि पुग्न सक्छ । जुन कानमा समस्या हुन्छ त्यही भागको आँखा बन्द नहुन सक्छ ।
ब्यालेन्स अर्गान र हेयरिङ अर्गानमा पनि समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चक्कर लागिरहन्छ । कान पाकेको छ र नराम्रो गन्ध आइरहेको छ भने अन्य रोगको लक्षण पनि हुन सक्छ । जालीका प्वाल नटालिए र इन्फेक्सन भइरहे शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
बच्चालाई सुताएर दूध नखुवाउने । बच्चाको कानमा समस्या देखिएका समयमै उपचार गर्ने । बच्चाको कानमा तेल नराख्ने । तेल राख्दा बाहिरको फोहोर भित्र गएर इन्फेक्सन हुन्छ । औषधि पसलमा गएर कान पाकेको छ भन्दैमा जे पायो त्यही औषधि नराख्ने । नाक, कान, घाँटीका डाक्टरलाई देखाउने ।